काम नगरी पाइने तलबले मान्छेलाई अल्छी बनाउँला ? | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय काम नगरी पाइने तलबले मान्छेलाई अल्छी बनाउँला ?
on: २७ माघ २०७५, आईतवार १७:४८ अन्तरराष्ट्रिय
काम नगरी पाइने तलबले मान्छेलाई अल्छी बनाउँला ?
माघ २७, हेलसिन्की (फिनल्याण्ड) । फिनल्याण्ड सरकारले २ वर्ष अघि सबै नागरिकहरुलाई आधारभूत न्यूनतम तलब (यूबीआई) अर्थात् कामै नगरी तलब दिने योजना परीक्षण गरेको थियो । २ वर्षको परीक्षण अवधि रहेको यो योजनामा २५ देखि ५८ उमेर बीचका २ हजार फिनिश नागरिकलाई मासिक ५ सय ६० यूरो बराबरको तलब दिइएको थियो । यसरी कामै नगरी तलब दिने योजना मानिसको हितमा भएपनि यसले उनीहरुको रोजगारी सम्भावनामा भने खासै धेरै प्रभाव नपारेको पाइएको छ । परीक्षणको प्रारम्भिक नतिजाले यस्तो देखाएको हो ।
पछिल्लो समय विश्वभर स्वचालनको लहर बढ्दो छ । स्वचालन र रोबोटको प्रयोग बढेसँगै भविष्यमा मानिसले गर्ने रोजगारीहरु खोसिने सम्भावना बढेका छन् । प्रविधिमा भइरहेको विकाससँगै आम मानिसमा परम्परागत ९-५ को जागिर खाने रुचि पनि घट्दै गइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा फिनिश सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने र आम जनतालाई बेरोजगार हुँदा पनि जीवन गुजारा गर्न एवम् कामको खोजीमा केही मद्दत हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्न सो परीक्षण गरेको थियो । तर यस योजनाको मिश्रीत प्रभाव देखिएको छ ।
योजनामा संलग्न भएकाहरुमा अस्थायी वा पार्ट-टाइम काम गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति देखियो । सहभागीहरुको वार्षिक गतिविधिको विश्लेषण गर्दा परीक्षणको पहिलो वर्षमा खुला श्रम बजारमा रोजगारी भेट्टाउन अन्य मानिसका तुलनामा यूबीआई पाउनेहरुको अवस्था न त राम्रो पाइयो न त खराब भनेर लेबर इन्ष्टिच्यूट फर इकोनोमिक रिसर्चमा अनुसन्धान संयोजक ओह्टो कान्निनेनले भनेका छन् ।
योजनामा सहभागी नभएकाका तुलनामा सहभागीहरुले बेरोजगार हुँदा समेत आफूलाई कम तनाव भएको, एकाग्रतामा कम कठिनाई भएको र स्वास्थ्य समस्या पनि थोरै मात्रै देखिएको अभिव्यक्ति दिएको योजना सञ्चालन गर्ने फिनिश सामाजिक बीमा संस्था केलाका प्रमुख अनुसन्धाता मिन्ना लिकानोले बताइन् ।भविष्य र सामाजिक मामिलाहरुमा प्रभाव पार्न सक्ने आफ्नो क्षमताप्रति सहभागीहरु बढी विश्वस्त भएको पाइएको छ ।
परीक्षणको नतिजाहरुले आम नागरिकलाई कामै नगरी तलब दिँदा के हुन्छ भन्नेबारे शताब्दिऔंदेखि चल्दै आएको वहस थप बलियो बनाउने निश्चित प्रायः छ । तीव्र गतिमा बढिरहेको असमानता कसरी कम गर्ने भन्नेबारे विश्वभर व्यापक छलफल भइरहेको अवस्थामा फिनल्याण्डले शुरु गरेको यूबीआई योजनाले अन्तरराष्ट्रिय जगतकै ध्यान खिचेको थियो । यसलाई अर्थशास्त्री र समाजशास्त्रीहरुले मात्रै होइन मार्क जुकरबर्ग र एलन मस्क जस्ता अर्बपतिहरुले समेत नजिकैबाट नियालिरहेका थिए ।
सामाजिक सुरक्षाका नाममा प्रयोगमा आइरहेका विभिन्न खाले सेवा सुविधा र भत्ताहरुलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले यूबीआईको अवधारणा अघि सारिएको थियो । यसका समर्थक र विरोधीहरु उत्तिकै छन् । यसले गरीबीको पासो निर्मूल पार्ने, आयको पुनः वितरण गरेर आम मानिसलाई सशक्त बनाउने र अनावश्यक कागजी कामको झन्झट कम गर्छ भन्ने धारण योजनाका पक्षधरहरुको छ । तर योजनाका आलोचकहरुले भने योजना निकै महँगो र अव्यवहारिक भएको भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
फिनल्याण्डको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली निकै जटिल छ । यसमा सुधार ल्याउनु पर्ने माग हालैका वर्षमा निकै बढेको छ । यस्तैमा सरकार भने यूबीआईले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सहज बनाउँछ कि बनाउँदैन ? अत्यधिक कर्मचारीतन्त्र हटाउँछ कि हटाउँदैन ? भन्ने खुट्टयाउँदैछ । अनुसन्धाताहरुले योजनाले सहभागीको शारीरिक र मानिसिक प्रशन्नतामा पारेको प्रभावको मापन गर्न खोजिरहेका छन् । योजनाबारे अन्तिम प्रतिवेदन सन् २०२० मा मात्रै आउने छ । तत्कालका लागि भने सरकारले यसलाई विस्तार नगर्ने भएको छ । एजेन्सी